Suga တစ်ယောက် ကျောင်းတုန်းကဘယ်လိုကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သလဲ? | News Bar Myanmar
Suga တစ်ယောက် ကျောင်းတုန်းကဘယ်လိုကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သလဲ?
Mnet ရဲ့ TMI ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာတော့ BTS အဖွဲ့ဝင် Suga ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လှစ်ဟပြခဲ့ပါတယ်။ ဂီတဖန်တီးရမှာ စည်းဘောင်မခတ်ပဲ စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း ခံစားရေးဖွဲ့တတ်တဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် rapper Suga တစ်ယောက် ကျောင်းတက်နေစဉ်က ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိလိုက်ရင်တော့ ပိုချစ်မိသွားမှာ အမှန်ပါ။
ကျောင်းသားလေး Min Yoon Gi ကတော့ စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး လိမ္မာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ကာ ကျောင်းရဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုကိုမှ ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ ဆရာမဟောင်းတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ သူဟာကျောင်းကောင်စီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါသေးတယ်တဲ့။
Video အျပည့္အစံုကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္
ကျောင်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် Suga လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ တာဝန်ကတော့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကျောင်းက ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို လိုက်နာကြရဲ့လားဆိုတာ စစ်ဆေးတဲ့တာဝန်ပါတဲ့။ သူတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားတွေဟာ ဆံပင်ကိုနားရွက်ဖုံးတဲ့အထိ ထားခွင့်မရှိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
Suga ရဲ့အရည်အချင်းတွေက ဒါအကုန်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောအသင်းမှာလဲ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆုတောင်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီအချိန်တည်းက ဂီတပါရမီရှိခဲ့တဲ့ Suga ဟာ ကျောင်းသီချင်းရေးစပ်သီကုံးမှုမှာလဲ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ကူညီခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အနုပညာမှာလဲ ထိပ်ဆုံးအထိရောက်အောင် ကျော်ကြားတဲ့ Suga ဟာ ကျောင်းတုန်းကလဲ ပြစ်ချက်မရှိတဲ့ စံပြကျောင်းသားတစ်ဦးဆိုတာ ဒီအချက်တွေကသက်သေပါပဲနော်။
Next Miss Korea တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ idol (၁၃) ဦး »
Previous « Lee Kwang Soo နဲ့ EXO ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Oh Sehun ကြားက ချစ်စရာ ညီအစ်ကိုသံယောဇဥ်